डाक्टर गोविन्द केसी पक्राउ प्रकरण - समसामायिक | Kantipur TV HD
डाक्टर गोविन्द केसी पक्राउ प्रकरण
अदालतको अवहेलना मुद्दामा पक्राउ गरि सर्वोच्च पुर्याइनुभएका प्राध्यापक डाक्टर गोविन्द केसीले प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीलाई नै न्यायिक छानविनको दायरामा ल्याई कारवाही गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ ।
सर्वोच्च अदालतमा हिजो बयान दिंदै डाक्टर केसीले प्रधानन्यायाधीश पराजुलीका कृयाकलापबाटै अदालतको अवहेलना भएकोले उहाँमाथि अनुसन्धान गर्नुपर्ने जिकिर गर्नुभएको हो ।
सर्वोच्चमा बयान दिने क्रममा डाक्टर केसीले प्रधानन्यायाधीश पराजुलीका नागरिकता, शैक्षिक योग्यता तथा राजश्व छली, भूमाफिया,आयल निगम, एनसेल, लगायतका निर्णयले अदालतको गरिमा माथि चुनौति दिएको डाक्टर केसीको दावी छ । केसीले सहि न्याय सम्पादन गर्ने न्यायाधिशहरुलाइ आफुले सम्मान गर्ने र आफ्ना कारणले अदालतको सम्मान बढेको तर घृणा पैदा नभएको समेत जिकिर बताउनुभएको छ । उहाँले गलत निर्णय र कार्य गर्ने न्यायाधीशका बारेमा बोल्दा अदालतको अवहेलना होइन सम्मान मिल्ने समेत बयानको क्रममा बताउनुभएको छ ।
केसीको बयान हिजो सकिएपनि पक्ष र विपक्षमा बहस आजबाट शुरु हुनेछ । केसीको मुद्दा न्यायाधीशद्वय ओमप्रकाश मिश्र र केदार चालिसेको इजलासमा छ ।डाक्टर केसीका तर्फवाट वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारी, सुरेन्द्र भण्डारी, ओमप्रकाश अर्याल र दिनेश त्रिपाठी लगायत झण्डै सय जनाले बहस गर्नुहुनेछ ।
यस्तै सर्वोच्च अदालतका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरु उपेन्द्रकेशरी न्यौपाने तथा रमण श्रेष्ठ लगायतले बहस गर्नुहुनेछ । बयान सकिए लगत्तै अनसनरत डाक्टर केसीलाई स्वास्थ्यमा समस्या देखिनसक्ने भन्दै वीर अस्पताल लगिएको छ ।
न्यायालय राजनीतिक दलको भर्ती केन्द्र बनेको भन्दै प्रधानन्यायाधीश गोपालप्रसाद पराजुलीको राजीनामा माग सहित केसीले अस्तिबाट अनसन थाल्नुभएको थियो । त्यसलगत्तै अदालतको अबहेलना मुद्धामा डाक्टर केसीलाई उपस्थित गराउन सर्वोच्चले आदेश दिएपछि उहाँलाई अनसनस्थलबाटै पक्राउ गरि प्रहरीले हिजो बिहान ९ बजे अदालतमा उपस्थित गराएको थियो।
सर्वोच्च अदालतले चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानबाट बर्खास्त भएका डिन ड‌ा. शशी शर्मालाई पुर्नबहाली गर्न आदेश दिएपछि केसीले अनसनको घोषणा गर्नुभएको थियो ।
डाक्टर गोविन्द केसीलाई पक्राउ गरेको विरोधमा उहाँका समर्थकहरुले हिजो राजधानीको माइतीघर मण्डलामा विरोध प्रदर्शन गरेका छन् ।
माइतीघर मण्डलामा विहानैदेखि उपस्थित भएका समर्थकहरुले केसीलाई तत्काल रिहाइ गर्नुपर्नै, उहाँले उठाएका माग पूरा गर्नुपर्ने भन्दै नारावाजी गरेका थिए । प्रदर्शनमा नागरिक समाजका अगुवा, राजनीतिकर्मी, चिकित्सक लगायत उपस्थित थिए ।
डाक्टर केसी पक्राउको विरोधमा समर्थन जनाउन माइतीघर मण्डला पुग्नुभएका पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नयाँ शक्ति नेपालका संयोजक बाबुराम भट्टराईले केसीलाई तत्काल रिहाई गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा पूर्व स्वास्थ्यमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका नेता गगन थापाले केसीका मागप्रति सबै गम्भीर हुनुपर्ने बताउनुभयो ।
केसी पक्राउको विरोधमा एक्यबद्धता जनाउन माइतीघर पुगेका विभिन्न दलका नेता,संघसंस्थाका प्रतिनिधी तथा नागरिक अगुवाहरुले समेत केसीलाई तत्काल रिहाइ गर्न माग गरेका छन् ।
चिकित्सक केसी पक्राउ परेपछि सर्वोच्च अदालत तथा माइतीघर मण्डला परिसरको सुरक्षा व्यवस्था बिहानैदेखि कडा पारिएको थियो ।
यसैवीच, नेपाल चिकित्सक संघले आफ्नो आजीवन सदस्य एवं त्रिवि शिक्षण अस्पतालका प्राध्यापक केसीलाई अस्पताल परिसरभित्रबाटै प्रहरीले हिरासतमा लिएको घटना प्रति दु:ख व्यक्त गर्दै यथासिघ्र रिहाईको माग गरेको छ ।
संघका महासचिव डा. लोचन कार्कीले जारी गरेको विज्ञप्तीमा डाक्टर केसीको सत्याग्रहको माध्यमबाट चिकित्सा शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रमा सर्वसाधारणहरुको सहज पहुँच, गुणस्तरीयता र जनसरोकारका विषयमा उल्लेखनिय प्रगति हासिल गराउन सफल भएको उल्लेख गरिएको छ ।
नेपाल चिकित्सक संघले अनसनरत डाक्टर गोविन्द केसीलार्इ तत्काल रिहार्इ नगरे आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको छ । संघको हिजो बसेको आकस्मिक बैठकले अनसनस्थलबाटै डाक्टर केसीलार्इ अपराधीलार्इ झै गिरफतार गरिएको भन्दै आपत्ति जनाएको छ । केसीलार्इ तत्काल रिहार्इ नगरे छिट्टै आन्दोलन घोषणा गर्ने संघको तयारी छ ।
डाक्टर केसीको सत्याग्रहकै कारण चिकित्सा शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रमा उल्लेखनीय प्रगति भएको भन्दै संघले अस्पताल परिसरभित्रबाटै केसीलाई पक्राउ गर्नु मानवअधिकार विपरित भएको समेत निष्कर्ष निकालेको छ ।
यसैबीच त्रिभुवन विश्वविद्यालय महाराजगञ्ज चिकित्सा क्याम्पस स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनले डाक्टर केसीको गिरफ्तारीको विरोध गर्दै यथाशिघ्र रिहाइ गर्न माग गरेको छ ।
नागरिक अभियान्ता डाक्टर गोविन्द केसीको गिरफ्तारीको बिरोध र रिहाइको माग गर्दै नेपालगन्जका युवा बिरोधमा उत्रेका छन् ।
नेपालगन्जस्थित वीपी चोकमा बिरोध प्रदर्शन गर्दै डाक्टरसहितका युवाहरुले न्यायालयमा राजनीतिक नियुक्तिको बिरोध गरेका थिए ।
केसीलाई पक्राउ गरेर वाक स्वतन्त्रतालाई सरकारले कुल्चेको भन्दै युवाहरुले केहि बेर सडकमा धर्ना दिएका थिए । यता पोखरामा पनि डा गोविन्द केसीको रिहाइको माग राखेर युवाहरले विरोध प्रदर्शन गरेका थिए ।
सर्वोच्च अदालतले चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानबाट बर्खास्त भएका डिन ड‌ाक्टर शशी शर्मालाई पुर्नबहाली गर्न आदेश दिएपछि डाक्टर गोविन्द केसीले प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको राजिनामा माग्दै अनशन शुरु गर्नु भएको हो ।
केसीका माग र अभिव्यक्तिले अदालतको अपहेलना भएको ठहर गर्दै सर्वोच्चको आदेशमा अनसन स्थलबाटै सोमबार राति ८ बजे पक्राउ गरिएपछिका घटनाक्रम यस्ता रहे ।
२०७४ साल पौष २४ गते सोमबार
डीन पुनर्वहाली सम्वन्धी सर्वोच्चको आदेशको दोश्रो दिन डाक्टर केसीले सरकारसँग भएका सम्झौता कार्यान्वन र न्यायालय भित्रको विकृति अन्त्यको माग गर्दै दिउँसो २ बजे पत्रकार सम्मेलन गरेर अपरान्ह ४ बजेदेखि अनसन थाल्ने घोषणा गर्नुभयो ।
प्रधानन्यायाधिश पराजुलीको राजिनामा सहित पाँच बुँदे माग राख्दै डाक्टर केसीद्धारा शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जमा अपरान्ह ४ बजेदेखि अनसन शुरु भयो । न्यायालय राजनीतिक दलको भर्ती केन्द्र बनेको दावी गर्दै उहाँले वरिष्ठताका आधारमा नियुक्त वहालवाला डिनलार्इ नै कायम गर्नुपर्ने माग राख्नुभयो ।
समय : अपरान्ह ४:३० बजे ।
प्रधानन्यायधीश पराजुलीको राजीनामा माग गर्दै अनशन थालेलगत्तै अदालतको अपहेलना गरेको ठहर सहित सर्वोच्चले डाक्टर केसीलाइ पक्राउ गरी उपस्थित गराउन आदेश दियो ।
समय : राति ८ बजे ।
सर्वोच्चको आदेशको केही समयपछि नै महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौको टोलीले केसीलाई महाराजगंजस्थित शिक्षण अस्पतालको अनसन स्थलबाटै पक्राउ गरी प्रहरी वृत्त अनामनगर ल्यायो ।
२०७४ साल पौष २५ गते म‌ंगलबार
समय : समय विहान ८ बजे ।
चिकित्सक गोविन्द केसी पक्राउको विरोधमा राजधानीको माइतीघर मण्डलामा विभिन्न संघसंस्था, राजनीतिक दल तथा नागरिक अगुवाहरुले विरोध प्रदर्शन गरे ।
२०७४ साल पौष २५ गते मंगलबार
समय : समय विहान ८:४५ बजे ।
अदालतको आदेश बमोजिम केसीलाई कडा सुरक्षाबीच बिहान पौने ९ बजे महानगरीय प्रहरी वृत्त अनामनगरबाट रामशाहपथ स्थित सर्वोच्च अदालत उपस्थित गराइयो ।
समय : समय दिउँसो १ :३० बजे ।
केसी माथि लागेको लागेको अदालतको अवहेलना सम्वन्धी मुद्धामा न्यायाधिश ओमप्रकाश मिश्र र केदारप्रसाद चालिसेको इजलासमा बयान शुरु भयो ।
मंगलवार अपरान्ह ४ बजे डाक्टर केसीको ११ बुँदे बयान सकियो । बयान सकिए लगत्तै उहाँलाई प्रहरीको निगरानीमा वीर अस्पतालमा राखिएको छ । मुद्दाको पक्ष बिपक्ष बहस भोलीदेखि शुरु हुँदै छ ।
हल्ला भएजस्तो वातावरणीय प्रभाव पर्दैन : अनुगमन टोली
न्यूनतम सेवा पनि पाउँदैनन् श्रमिकले
न्यायाधीश कम, मुद्दा धेरै